YEYINTNGE(ကနဒေါ): Tuesday, April 16
hein Htike Aung's photo.
BY YeYint Nge ... 4/16/20130comment
1။Martin Richard was eight years old.
2။Krystle Campbell, 29, from Medford, Massachusetts
ဘော့စတွန်ဗုံး pressure cookers ထဲမှာသံစများနှင့်အတူထဲ့သွင်းပြီး
Campbell, 29, wasarestaurant manager
ဘောင်းဘီချက်ပြုတ်ဝတ်လျှင် တရားမ၀င် (ဒဏ်ငွေဆောင်ရမည်)
တာရေဘွန်န်း ပါရိရှ်၊ လူအီစီယားနားပြည်နယ်၊ ယူအက်စ်တွင်
ဘောင်းဘီချက်ပြုတ် (ပုံပါတိုင်း) ၀တ်ပါက တရားမ၀င်ပဲ
အရေးယူခံရမည်ဖြစ်သည်။ တာရေဘွန်န်း ပါရိရ်ှမြို့ အုပ်ချုပ်ရေး
ကောင်စီမှ မကြာသေးမီက ဆန္ဒမဲပေး၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး
ပစ်မူကျူးလွန်သူသည် ပထမအကြိမ်တွင် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ (၅၀)
နှင့် ဒုတိယအကြိမ်တွင် ဒဏ်ငွေ (၁၀၀) ပြဏ်ဒဏ်ပေးဆောင်ရ
မည်ဖြစ်သည်။ (မှတ်ချက် - တတိယအကြိမ်တွင် မည်သို့ အရေးယူ
အခုလိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းဟာ ဖွဲ့ စည်းပုံမှာပါတဲ့ "freedom of
expression" နဲ့ ဆန့် ကျင်နေတယ်လို့အချို့ က ကန့် ကွက်နေတဲ့
အကြားက - မြို့ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ရှစ်မဲ တမဲနဲ့ အတည်ပြု
မင်းသား" ဂျပ်စတင်ဘေးဘာ (အဆိုတော်) ဟာ သည်မြို့ ကို
နောက်ထပ်လာလည်မှာ မဟုတ်တော့ကြောင်း .... ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ OIC ခေါ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် နိုင်ငံများအဖွဲ့ချုပ်က လာရောက်ဆွေးနွေးလိုပါကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကို အကြောင်းကြားထားတဲ့ကိစ္စကို မကွေးတိုင်းမြို့နယ် ၈ မြို့နယ်မှာရှိကြတဲ့ သံဃာတော်တွေက ကန့်ကွက်ကြောင်း သမ္မတရုံးကို စာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
ပခုက္ကူ၊ ရေစကြို၊ ချောက်၊ ရေနံချောင်း စတဲ့ မြို့နယ် ၈ မြို့ နယ်က သံဃာထုတွေ စုပေါင်းပြီး အဲဒီလို တညီတညွှတ်ထဲ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပခုက္ကူမြို့နယ် ရှင်မတောင်ဆရာတော် ဦးကဝိန္ဒောဘာသက မိန့်ကြားပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့က ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ Jeddah မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ OIC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအပြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ မိတ္ထီလာနဲ့ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ ဝန်ကြီးအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခွင့်ပြုပါလို့ မြန်မာအစိုးရကို ပန်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုကျိုမြို့ရှိ အိုင်နိအိချိ Mainichi သတင်းစာတိုက်ရုံးချုပ်ကို ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့က သွားရောက် လည်ပတ်စဉ်
သတင်းစာကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဌ မစ္စတာ ယူတာကား အစာဟီးန (Mr. Yutaka Asahina) က ကြိုဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များမှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်/ဂျပန်အိမ်ရှေ့မင်းသားနဲ့ တွေ့ဆုံ
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၁၆.၄.၂၀၁၃ မြင်ကွင်းရုပ်သံ..
၁၆.၄.၂၀၁၃ က ဂျပန် အောက်လွှတ်တော်ကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များမှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပုံ မြင်ကွင်းရုပ်သံနှင့် ဂျပန်အိမ်ရှေ့မင်းသားနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်း ရုပ်သံပါ..။
လွှတ်တော်အတွင်း လွှတ်တော်အမတ်တွေ ကြိုဆိုကြတဲ့ မြင်ကွင်းမှာတော့ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ကြည်လင် ကျက်သရေရှိလှတဲ့ ပုံရိပ်ကို တွေ့မြင်ရမှာပါ..။
Meeting with Japanese Foreign Minister Fumio Kishida
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များ တွေ့ ဆုံဆွေနွေးပွဲတွင် ဂျပန်လွှတ်တော် ကိုယ်စား ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဟတိုးယာမ မှ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကို ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ချီးမြှင့်ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဆုဟာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်များ သမဂ္ဂက ၂၀၀၉ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ရက်မှာ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးခဲ့သော ဆုဖြစ်ပါတယ်။
တိုကျိုမြို့တော်က တိုဂူးနန်းတော်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဂျပန်အိမ်ရှေ့မင်းသား Naruhito နာရူဟီတိုနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်အိမ်ရှေ့မင်းသားနဲ့ အမေစုတို့ကဗြိတိန်နိုင်ငံက Oxford တက္ကသိုလ်မှာ ပညာအတူ သင်ယူခဲ့တဲ့ ကျောင်းနေဖက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Aung San Suu Kyi (C) reacts as she observes the Japanese Lower House's budget committee session at the National Diet in Tokyo on April 16, 2013
BY YeYint Nge ... 4/16/20130comment Links to this post
ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၃း၃၀ နာရီအချိန်ခန့်က ပိတ်ထားသော ဗလီတစ်ခုဖြစ်သည့် စစ်တွေမြို့လယ်မှ ဗလီသို့ ဘင်္ဂလီအမျိုးသမီး ၁ ဦး သည် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးနှင့်အတူ ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ကြိုးစားခြင်းအားသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက တားဆီးပြောဆိုသော်လည်း လွန်စွာမောက်မာ ရိုင်းစိုင်းသောစ ကားများပြောဆိုခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ရဲစခန်းသို့ခေါ် ယူ ဖြေရှင်းခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ဘင်္ဂလီအမျိုးသမီးသည် အင်ဒိုနီးရှားသူဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလီတစ်ဦးဖြစ်ကာ လွန်ခဲ့သော လေးလခန့်ကလည်း စစ်တွေမြို့သို့ တစ်ကြိမ်ရောက်ရှိ လာခဲ့ပြီး ပြဿနာပေါင်းစုံကိုဖမ်းတီးခဲ့ကြောင်း၊
သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ တားဆီးပိတ်ပင်ထားသော နေရာများအားလုံးအား ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
အဆိုပါ နှစ်ဦးသည် သတင်းထောက်များဖြစ်ပြီး ခရီးသွားပုံစံဖြင့်ဝင်ရောက်လာသူများဖြစ်ကာ ဘင်္ဂလီများထံမှ မဟုတ်မမှန်သတင်းပေါင်းစုံကို ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများရိုက်ကူးရန်ေ ရာက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။
ထိုသို့ ဥပဒေမဲ့စွာ ပြုလုပ်သူများအား ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် လက်လွှတ်ထားခြင်းသည် ရခိုင် ပြည်နယ်အတွက် အန္တရာယ်များပြား လှကြောင်းနှင့် လုပ်သင့်သည်များကို လုပ်ဆောင် ရန်လိုအပ်ကြောင်း လည်း ပြောဆိုကြပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များမှ ကြို...